Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » India bu n'obi ịtọlite ​​ọdụ ụgbọ elu 200 ọhụrụ site na 2024
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Na-agwa FICCI Transport Infra Summit "Lekwasị anya: Accelerating the Pace of Transport Infra Development na Odisha," nke FICCI Odisha State Council haziri, onye odeakwụkwọ nkwonkwo, Ministry of Civil Aviation, Gọọmenti India, Ms. Usha Padhee, kwuru na ụgbọ elu India. ngalaba ahụ egosila uto siri ike n'ime afọ ole na ole gara aga ma bụrụ ihe ngosi maka mbọ India na-eme maka akụ na ụba US $ 5 trillion. Ọ gara n'ihu kwuo na ụgbọ elu obodo abụghị okomoko kama ọ bụ usoro njem nke ọma.
"Ụgbọ elu ụgbọ elu Ọ bụghị naanị ụdị ụgbọ njem mana injin na-eto eto maka mba ahụ,” ka o kwuru. Nwada Padhee gara n'ihu kwuo nke ahụ India nwere ahịa ụgbọ elu ụlọ nke atọ kachasị ukwuu, ma ọ dị njikere ịghọ ahịa nke atọ kasị ukwuu n'ahịa ụgbọ elu n'ụwa nile site na 2024. "Ndị mmadụ ga-enwe ike ịbụ akụkụ nke ngalaba ụgbọ elu na-eto eto," ka ọ gbakwụnyere. O kwuru na ngalaba na-ahụ maka ụgbọ elu obodo ga-abụ ndị ọrụ nzuzo na gọọmentị ga-arụkwa ọrụ dịka onye nkwado.
Ụgbọ elu ndị dị na Tier 1 na Tier 2 obodo na-enye nguzozi zuru oke maka ịmepụta ntinye ego nke onwe, na ebe ntinye ego nke onwe na-agaghị ekwe omume, gọọmenti na-etinye ego, ka Ms. Padhee kwuru.
N'ịkọwapụta ihe ịma aka ndị ahụ, o kwuru na azụmahịa ndị dị na mpaghara a ga-abụrịrị nke ọma na ntinye aka na amụma na ụkpụrụ ga-abụrịrị enyi na enyi. "Anyị nwere olile anya iji ntuziaka ndị a dozie ihe ịma aka ndị a," Onye odeakwụkwọ nkwonkwo kwuru.
N'ịkọwapụta akụrụngwa ụgbọ njem nke Odisha, Nwada Padhee kwuru na gọọmentị steeti emeela ka ọ bụrụ steeti bara uru, na njikọta bụ isi ihe dị na Odisha. Ọ sịrị, "Anyị bu n'obi ịhụ na njikọta na-adịgide adịgide." O kwukwara na a ga-enye ikikere ọdụ ụgbọ elu Rourkela n'ime ọnwa isii na-abịa.
Manoj Kumar Mishra, odeakwụkwọ, Electronics na Technology Technology, Secretary, Science and Technology, CRC na Special Secretary, Commerce and Transport Department, Gọọmenti Odisha, kwuru na a ghaghị iji ike nke akụkụ ndị na-emepụta ihe na-arụ ọrụ iji weda ọnụ ahịa na ego. steeti ahụ na-etinye nnukwu ego n'iwu okporo ụzọ steeti.
Maazị Subrat Tripathi, CEO, APSEZ (Ports), kwuru na ntinye nke teknụzụ na mpaghara logistics bụ ihe kacha mkpa. Ọ sịkwara na a pụghị ịhụ ihe ngwọta logistics nọpụrụ iche, n'ihi na ọ bụ ngwakọta nke ngwọta. O mere ka ọ pụta ìhè na ụzọ akụ na ụba na ọtụtụ njikọta na ọdụ ụgbọ mmiri bụ mkpa nke oge awa.
Dr. Pravat Ranjan Beuria, Director - Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar, kwuru na ụlọ ọhụrụ ọnụ ụlọ nwere ike ijikwa 2.5 nde ndị njem kwa afọ na ntinye aka nke ụlọ ọrụ nkeonwe bụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ ọha na eze.
Mazị Dillip Kumar Samantaray, onye isi njikwa, Angul – Sukinda Railway Pvt Ltd., kwuru na mmepe na steeti enweghị ike ime ma ọ bụrụ na enweghị mmepe nke ụgbọ oloko.
Mazị Siba Prasad Samantaray, Onye isi nchịkwa, Odisha Rail Infrastructure Development Ltd., kwuru na ụgbọ okporo ígwè abịawo ogologo oge n'ihe gbasara njikọta na nkasi obi. "Anyị bụ ndị na-enye aka maka ọganihu ọhụrụ na Odisha, na nke a bụ oge ịgbasa netwọk," ka ọ gbakwụnyere.
Nwada Monica Nayyar Patnaik, Onye isi oche, FICCI Odisha State Council and Managing Director, Sambad Group, na adreesị nnabata ya kwuru, "Anyị kwesịrị inyocha ohere dị iche iche na ngwọta maka akụrụngwa ụgbọ njem dị irè na nke ọma ebe anyị nwere ike nweta echiche anyị."
Mr. JK Rath, Onye isi oche, Kọmitii MSME, FICCI Odisha State Council, Director, Machem, na Mr. Rajen Padhi, Onye isi oche na Kọmitii Mpụpụ, FICCI Odisha State Council na Onye isi nchịkwa azụmahịa, B -One Business House Pvt. Ltd., kwuputara echiche ha gbasara mkpa akụrụngwa ụgbọ njem nke ọma na steeti ahụ.
Max Hartshorne ekwu, sị:
November 25, 2021 na 12: 25
Ọ nweghị ihe dị n'isiokwu a gbasara ịrụ ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ ọ bụla. Ebee ka akụkọ ahụ si bịa? M weed site gị na-adịghị agwụ agwụ mmapụta mgbasa ozi na unmoveable video ọkpụkpọ na-agbalị ịchọta ihe ọ bụla banyere a ọhụrụ ọdụ ụgbọ elu ahụghị ihe ọ bụla. Ị na-ekwukwa n'isi akụkọ na ha ga-ewu ọdụ ụgbọ elu 200 site na 2024??? Afọ abụọ iji wuo ọdụ ụgbọ elu 200 bụ ihe efu.
Dịka onye nchịkọta akụkọ na onye na-ede akụkọ akụkọ, ị nwere ọrụ iji mee ka aha ahụ gosipụta ọdịnaya akụkọ ahụ n'ezie. Nke a ọ bụ mgbalị ọzọ na-achọsi ike iji nweta ọpịpị? Ee ị nwetara ya.